Nandrisika ny fanemorana ny fivoriamben'ny UNWTO: Nahemotra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny WTO!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Nandrisika ny fanemorana ny fivoriamben'ny UNWTO: Nahemotra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny WTO!
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Travel Wire News • WTN
Ny WTO hafa dia vao avy nanemotra ny fihaonamben'ny minisitra lehibe momba ny varotra, nokasaina tamin'ny 30 Novambra tany Genève, noho ny risika mety ho avy amin'ny variana COVID vaovao. Hanaraka ve ny UNWTO? Ny Sekretera jeneralin'ny Honorary, ny World Tourism Network ary ny African Tourism Board dia manentana ny UNWTO hanaraka ny WTO.
Ny Filankevitra Foiben'ny World Trade Organization (WTO) Nanaiky ny faran'ny zoma (26 Novambra) ny hanemotra ny fihaonamben'ny minisitra taorian'ny fipoahan'ny tsimok'aretina Omicron Covid Variant B.1.1.529, izay nahatonga ny governemanta maro hametraka fameperana amin'ny dia izay mety hanakana ny minisitra maro tsy ho tonga any Genève.
Tsy nisy valiny rehefa eTurboNews nifandray tamin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) raha toa ka nahemotra ihany koa ny Fivoriambe ho avy any Madrid amin'ny fe-potoana mitovy amin'ny Filan-kevitry ny WTO.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Francesco Frangialli anefa dia nanao fanambarana tamin'ny zoma nilaza hoe:
“Raha jerena ny fandrahonana ara-pahasalamana vaovao sy ny fomba fijeriko, dia fahendrena ho an'ny UNWTO sy Espaina ny handao an'io antony ara-pahasalamana mazava sy matanjaka io ho an'ireo solontena sy minisitra handeha ho any Madrid afaka andro vitsivitsy.
Andrasana ny fahatongavan’ireo solontena avy amin’ny faritra maro maneran-tany. Fanampin'izany, ny fanavakavahana amin'ny ankapobeny izay mety hitranga amin'ireo solontena mipetraka any amin'ny firenena manana famerana ny dia, indrindra fa avy amin'ny Firenena Afrikana maromaro dia tsy azo ekena ho an'ny Fikambanana iray izay tsy maintsy hitondrana ny mpandray anjara amin'ny dingana mitovy.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany haingana dia nitehaka ity fanambarana ara-potoana nataon'ny Sekretera Jeneraly Honorary ity, indrindra noho ny maha zava-dehibe ny fivoriamben'ny UNWTO ho an'ireo mpandray anjara marobe nisoratra anarana avy any Afrika.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina Manatrika hetsika any Rwanda amin'izao fotoana izao dia miombon-kevitra amin'ny WTN sy ny Sekretera jeneraly teo aloha.
Ao amin'ny World Trade Organization, ny Fihaonamben'ny Minisitra faha-12 (MC12) dia tokony hanomboka ny 30 Novambra ary haharitra hatramin'ny 3 Desambra, fa ny fanambarana ny famerana ny dia sy ny fepetra takian'ny confinement any Soisa sy ny firenena eoropeanina maro hafa no nitarika ny Filohan'ny Filankevitra Foibe Amb. Dacio Castillo (Honduras) hiantso fivoriana maika ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny WTO hampahafantarana azy ireo ny zava-misy.
"Noho ireo fivoarana mampalahelo ireo sy ny tsy fahatokisana aterak'izany dia tsy misy fomba hafa afa-tsy ny manolotra ny hanemorana ny fihaonamben'ny minisitra sy ny famerenana azy io haingana araka izay azo atao rehefa mamela ny fepetra," hoy i Amb. Hoy i Castillo tamin'ny Filankevitra Foibe. "Matoky aho fa hankasitraka tanteraka ny maha-zava-dehibe ny toe-javatra ianao."
Ny tale jeneraly Ngozi Okonjo-Iweala dia nilaza fa ny fahateren'ny dia dia midika fa maro ny minisitra sy solontena ambony no tsy afaka nandray anjara tamin'ny fifampiraharahana nifanatrika tamin'ny fihaonambe. Izany dia hahatonga ny fandraisana anjara amin'ny fototra mitovy tsy azo atao, hoy izy.
Nasongadiny fa delegasiona maro no efa ela no nitazona fa ny fivoriana dia saika tsy manolotra karazana fifandraisana ilaina amin'ny fanaovana fifampiraharahana sarotra amin'ny olana saropady ara-politika.
“Tsy mora ny fanolorana izany… Saingy amin'ny maha Tale jeneraly ahy, ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny MC12 no laharam-pahamehana - ny minisitra, ny solontena ary ny fiarahamonim-pirenena. Tsara kokoa ny manao fahadisoana amin'ny lafiny fitandremana, ”hoy izy, ary nanamarika fa ny fanemorana dia hanohy hitazona ny WTO hifanaraka amin'ny fitsipika Soisa.
Ny mpikambana ao amin'ny WTO dia niray feo tamin'ny fanohanany ny tolo-kevitry ny Tale jeneraly sy ny Filohan'ny Filankevitra Foibe, ary nanome toky izy ireo fa hanohy hiasa amin'ny fampihenana ny tsy fitovizan'izy ireo amin'ny lohahevitra fototra.
Azo antenaina ihany fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany eo ambany fitarihan'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili dia manana fiahiana mitovy amin'ireo minisitry ny fizahantany, ary mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fanomezana solontena avy any Afrika Atsimo, Eswatini, Botswana, Zimbaboe, Zambia, ary ny hafa. Ireo firenena Afrikana, Belzika ary Hong Kong dia mitovy amin'ny fiheveran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny varotra.
Androany ny governoran'i New York any Etazonia dia nanambara fanjakana maika ho an'ny fanjakany, na dia tsy mbola nisy trangan'ny viriosy vaovao hita aza.
Nisy tranga hita tany Afrika Atsimo, Botswana, Belzika ary Hong Kong, ary antenaina hiparitaka.
Ho an'i Genève, nofy ratsy ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny varotra izany.
Efa nampoizina ity Fihaonambe ity nandritra ny efa-taona. Ary nisy fanapahan-kevitra lehibe noraisina momba ny varotra iraisam-pirenena ho fanapahan-kevitra anatiny ho an'ny Andrim-panjakana.
Zava-misy sarotra ho an'ny UNWTO handraisana ity fanapahan-kevitra ity:
Tsy misy fepetra ao amin'ny satan'ny UNWTO mifandraika amin'izany karazana toe-javatra maika izany. Ny andininy faha-20 ao amin'ny Lalàm-panorenana ihany no azo ilazana azy izay manome fahafahana ny Filan-kevi-pitantanana handray ny fanapahan-kevitra rehetra ilaina eo anelanelan'ny fotoam-pivoriana roa ao amin'ny Antenimiera.
Raha te hitondra ny Filankevitra dia mazava ho azy fa anjarany izany. Ny tena zava-dehibe dia ny tsy fisian'ny masoivoho any Madrid indrindra fa miandraikitra ny UNWTO, toy ny amin'ireo fikambanana lehibe maneran-tany.
Miankina betsaka amin'ny toe-tsaina sy ny fanapahan-kevitry ny Governemanta Espaniola satria tsy ny fahasalaman'ny solontena sy ny fahasalaman'ny mpiasa ihany no tandindomin-doza, fa ny fiarovana ny mponin'i Madrid.